Solotenan’ny firaisamonim-pirenena ao amin’ny CENI : ny 26 oktobra no tanterahina ny fifidianana – Depeche TARATRA
Accueil/Politique/Solotenan’ny firaisamonim-pirenena ao amin’ny CENI : ny 26 oktobra no tanterahina ny fifidianana
Ndriamparany 22 octobre 2021
Tafajoro ny « commission ad hoc » misahana ny fandraisana sy fandinihana ny taratasim-pilatsahan’izay ho solontenan’ny fiarahamonim-pirenena hilatsaka eo anivon’ny CENI.
Mitovy amin’ny vondronasa rehetra ihany ny fepetra sy sivana napetraka ankoatra ny fananana traikefa amin’ny fandraisana anjara teo amin’ny fanaraha-maso sy fitantanana ny fifidianana nandritra ny roa taona nisy teto amin’ny firenena ary voamarina.
Nisokatra ny 21 oktobra ny fandrotsahana ny taratasy filatsahana ary mifarana ny 23 oktobra. Mifanindran-dalana amin’izany koa ny fiantsoana teo anivon’ny antenimierampirenana. Ny 26 oktobra no tanterahina ny fifidianana izay ho solontenan’ity rafim-panjakana ity mandritra ny fihaonambe azon’ny rehetra hatrehana. Misokatra amin’ny olon-drehetra manaja ny fepetra ny olona hofidiana izay hisolo tena ny antenimierampirenena araka ny taratasim-pahafantarana.
Andrasana ny taratasy fampiantsoana ataon’ny biraon’ny holafitry ny mpanao gazety voafidy vaovao izay tafajoro tamin’ny fomba ofisialy ny 20 oktobra lasa teo. Nisy ny fanambarana nataon’ny filohany, Rasoloarison Monica fa andraikitry ny holafitra vaovao ny misahana izany. Mbola afaka mamerina mametraka antontan-taratasim-pilatsahana ireo olona efa natolotra sy nankatoavin’ny biraon’ny holafitra teo aloha raha ny fanambarana nataony.
Tribunal de première instance d’Antananarivo: les faux signatures pullulent
73kg d’or: un nouveau suspect arrêté
Tsimbazaza : ny teti-bolam-panjakana 2022 no tena hisongadina
Vondrona Eropeana : nanamafy ny fanohana sy ny fiaraha-miasa amin’i Madagasikara.
Nankahery ireo ianjadian’ny kere any Atsimo ny Praiminisitra
Tolo-dalàna ” Raholidina”: lany teny amin’ny antenimieran-doholona
COMESA : Manatanteraka atrik’asa hamolavolana ireo paikady hampandrosoana ny tanora